Kaleidoscope: App kala duwan oo loogu talagalay Apple ee faylalka, Koodhka, iyo Sawirada | Martech Zone
Mid ka mid ah macaamiisheennu wuxuu u baahan yahay qaab cusub oo loogu talagalay boggooda gurigiisa oo u baahan xoogaa horumar ah dhammaan bogagga mawduuca. Intii aan ku fiicneyn faallooyinka, maanaan diyaarin dukumiinti buuxa oo ku saabsan dhammaan faylasha cusub ee la cusbooneysiiyay ee aan horumarinay mana aanan hubinaynin isbeddel kasta oo lagu geynayo meel lagu keydiyo (macaamiisha qaarkood ma rabaan taas). Xaqiiqda ka dib, maahan wax lagu farxo in dib loogu noqdo oo la baaro fayllada iyo faylalka, sidaa darteed waxaan raadiyay xalka waana helay - Kaleidoscope.
Marka la adeegsado 'Kaleidoscope', waxaan awooday inaan farta ku fiiqo mid kasta oo ka mid ah galka isla markiibana aan garto feylasha lagu daray, laga saaray, ama ay ku kala duwanaayeen midba midka kale.
Waxaan markaa awooday inaan furo mid kasta oo ka mid ah feylashaha wax laga beddelay oo aan arko is barbar-dhig dhinac-ka-mid ah ee isbeddelada koodhka ee la dhammaystiray. Waa kuwan tusaale faylalka qoraalka oo cad:
Haddii taasi aysan ku filneyn, Kaleidoscope sidoo kale waxay ku guuleysan kartaa isbarbardhig isku mid ah sawirrada!
Ka dib markii aan soo dajiyay, waan kacay oo waxaan ku socday ilbiriqsiyo gudahood - isdhaafsiga adeegsadaha wuxuu ahaa mid dareen leh oo sahlan in la ogaado.
Soodejiso Maxkamad 14-Maalmood oo Kaleidoscope ah
Tags: tufaaxaisbarbardhiga koodhkaisbarbardhiga barnaamijkakala duwanApp kala duwanisbarbardhiga faylkaisbarbardhiga galkakala duwanaanta galkaisbarbardhiga sawirkasawir muuqaal ahmacruufkaOSX